Ihe edemede Alex Membrillo na Martech Zone |
Edemede site na Alex Membrillo
Contentfọdụ ọdịnaya na-arụ ọrụ karịa ndị ọzọ, na-emeri ọtụtụ mbak na ọtụtụ ntụgharị. Contentfọdụ ọdịnaya na-eleta ma na-akọrọ ugboro ugboro, na-eweta ọtụtụ ndị ọhụrụ na akara gị. Na mkpokọta, ndị a bụ iberibe nke na-eme ka ndị mmadụ kwenye na akara gị nwere ihe bara uru ikwu na ozi ha ga-achọ ịkọ. Kedu otu ị ga-esi zụlite ọnụnọ n'ịntanetị nke gosipụtara ụkpụrụ ndị na-eme ka ndị ahịa nwee obi ike? Cheta ntuziaka ndị a mgbe ị